kulan looga hadlayay xoojinta shuruucda kadhanka ah tacadiyada jinsiga oo Muqdisho kadhacy - Tilmaan Media
kulan looga hadlayay xoojinta shuruucda kadhanka ah tacadiyada jinsiga oo Muqdisho kadhacy
Waxaa magaalda Muqdisho kadhacay kulan lagu qabtay xafiiska Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, kulankaan ayaa looga dooday sidii loo xoojin lahaa shuruucda kadhanka xadgudubyada jinsiga (Kufsiga) oo kor ukac sameeyay tan iyo intii lagu guda jiray Koronafayras.
Kulankaan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha Ururada Bulshada, CID da, qareemo, bahda caafimaadka, waxayna kasoo qayb galayaashu isla qaateen in in si wadda-jir ah looga wadda shaqeeyo in dhibanayaashu cadaalad helaan.
Saraakiil Caafimaad oo ka socotay Cisbitaalka Madiino oo kulanka ka qayb-galay ayaa sheegay in dhibanayaashu ka so daahaan Cisbitaalka oo aysan deg deg u imaan, taaso inta badan keenta in natiijadda baaritaanka ay so saarto nagetive.
Qareenada ayaa dhankooda sheegay in kufsigu aad ugu badan yahay meelaha ay kunool yihiin dadka danyarta ah, sida kaamamka barkacyaasha iyo meelaha aysan Saldhigyadda ciidanka aysan ka dhaweyn.
Xeer Ilaalinta Qaranka ayaa sheegtay in labadii bilood ee lasoo dhaafay ay soo gaareen illaa lix kiis oo kufsi ah, dadkii lagu soo eedeeyayna ay haatan u xiran yihiin.
Gunaanadkii kasoo qayb galayaasha kulanka ayaa isku raacay muhiimada ay leedahay kor uqaadida wacyigalinta dadka, in lahelo garsoorayaal ugaar ah kiisaska kufsiga iyo helidd qalabka lagu baaro DNA si sifudud loo ogaan karo in qofka dambiga looo haysto uu falka gaystay iyo inkale.
Kulankaan ayaa kusoo aadaya iyadoo waayadan dambe meelo Soomaaliya kamid ah kadhaceen kiisas kufsi ah. Dadka gaystay kufsiga ayaa qaybtood ladoogtay halka kuwa kalena aysan cadaladda hor iman ama lagu xaliyay qaab beeleed hoose.
Mucaaradka Maali oo u dabaal dagaya inqilaabka millatari ee dalkaas kadhacay